युवाहरुकाे एकता कहाँ सम्म पुगियो? क.पुर्ण बहादुर भुजेल ‘चिन्तन’ «
युवाहरुकाे एकता कहाँ सम्म पुगियो? क.पुर्ण बहादुर भुजेल ‘चिन्तन’
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७५, बिहीबार ०७:२४
युवाहरुकाे संगठन एकता प्रकृया कुरा छ, धेरै कुरा माथि छलफल गरिकन गघि बढिरहेकाे छ । अहिले हामीले सातवटा प्रदेश समिति सग छलफल गरिकन अगाडि बढेको छ। मुख्यगरी युवा वाइसिएललाई सम्पूर्ण रूपले एकतामा सामेल गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण संगठन पुरा तयारीमा रहेको छ । समकालिन राजनीतिको सेरोफेरोमा हामिले वाइसियाल नेपालका केन्द्रीय समिति सचिव तथा प्रदेश १ न का प्रदेश ईन्चाज क. पुर्ण बहादुर भुजेल ‘चिन्तन’सँग मुन्धुमस्टार डटकमटिमले गरेको अन्तरबार्ताको अन्श :
तपाईहरूको युवासंगठनलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्वले कसरी लिएको छ त ?
हाम्रो भेटमा अध्यक्षले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ । अलिढिलो भएकोमा हामी आलोचित पनि भयकाछाै। अब यसलाई अविलम्व कार्यान्वयन गर्ने भन्नु भएको छ । हाम्राे युवा संगठन वाईसीएल नेपाल तयारी अबस्थामा छ कुनै पनि बैला एकता जान तयारी छ। संघमा केहि काम बाकी छन हाेला तेहि भयर विलम्ब भयकाे हो ।
युवाहरु प्रति तपाइहरू कत्तिको आशावादीहुनुहन्छ ?
हामीले संगठन भित्र मापदण्ड बनाएकाे छाै।अहिलेसम्म संगठनमा कामगरी राखनु भयका कतिपय कमरेड साथिहरु याे एकताबाट विदाबारी लिनु हुनेछ।उहाहरु नया जिम्मेवारीका साथ याे आन्दोलनमा नया ढङ्गले सहभागी हुनुहुन्छ ।कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको तयारी राम्रोसँग गरेकछाै।सातवटै प्रदेशमा युवाहरूलाई हरेक हिसाबले जिम्मेवारी दिनेछ, दिएको जिम्मेवारी पूरा हुन्छन् भन्नेमा आशावादी छौ ।
तपाईको संगठनमा गुट भित्र्दै छ भन्नेगरिएको छ नी ?
यो एकदम गलत हो । अहिले कसैले युवा संगठनमा गर्‍यो वा कुरा उठायो भने व्क्तीगत रबैया हो।यो एकदम गलत छ।यसो गरिनु हुन्न।यो संगठन भनेको आम देशभक्त प्रगतिसिल युवाहरुकाे वाइसिएल नेपाल न्यायोचित कुराहरू समेटेरै अगाडि बढेर आएको छ ।हामीले सबै प्रदेशका साथीहरूसित छलफल गरेर अघिबढेकाे छाै। यहासम्म आइपुग्दा,छलफल हुादा यी विचारमा ठीक छन्,अडिक हुन्न भन्ने सबैको सुझाव छ ।
संगठनमा शाेच्छ हाबा भन्दा प्रदुशित हाबा चल्ने देखिन्छ नी ?
अहिलेसम्म हामीले पाटीमा एउटा इमानदारीपूर्वक काम गरेका छाै । भविष्यमा पनि पाटी संगठनलाई जिवनत राखने प्रयास जारी रहन्छ ।कुनै प्रकारकाे दुशित जिबाणु राेग भाईरस आक्रमण हुन नदिन हामि सचेतक पुर्ण लागिरहेका छाै। तेस प्रकारकाे राेग लागन बाट हाम्रो मेडिसिन संचालित गरने तपाईं लाईर आम युवाहरुमा जानकारी गदछाै। पार्टी र क्रान्तिको लागि सारा समय दिन तयार छाै। अहिले पनि कयाे युवाहरु प्राण दिन तयार छन ।क्रान्ति भन्दा अरुकुनै विषय ठूलो होइन । पार्टी समाजवादकाे दिशामा पुग्छ भने,जनताकै मूल्य मान्यता र आदर्शमा लिडर रहन्छ भने माथि उठाएका ठूलो विषय मान्दैनौ र हिजो मानेका पनि त थिएनौं ।
पाटीमा आदर्श स्खलन हुनुमा दोष कसलाई दिनेत ?
पार्टी, जनता र सबैतिरबाट हेर्दा पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि सुझावलाई ख्याल गरेको छाै । तर पाटीमा स्खलन होइन मजबुदि आएको छ,पाटीले झन झन झलाङ मारेको छ। टुक्राटुक्रा मा रहेको पाटीलाई विशाल संगठनमा परिणत गरिकन सामाज्वादी दिशाकाे बाटो समाहित भयकाेछ। समाजवाद बाटाे भयर,एसमा मूख्यगरी अध्यक्ष प्रचण्डलाई शैय जान्छ । याे नयाँ विचार हो । विचलन र स्खलन देखा परेको होइन।
पाटीभित्रका नेतालाई याे युवाले अब खबरदारी गछकि गदैन?
पार्टीलाई जिवन्त राखन जनजिविका विकास,दिगाे शान्ति,खुशि नेपाल, सुखि नेपाली, आथिक क्रान्ति तिब्रता गतिमा अघिबढाउने सबालमा सधै साथ रहिरहन्छ ।जन विरोधी विकास विरुदी,शान्ति विरुद्ध हिजाे पनि विरुद्ध आवश्यकता मा आबाज उठायकाछाै आजपनि खराब विचार निति नेतुत्व आवाज उठाउनु खबरदारी गनु हाम्रो दात्ताे हो। कुनै पनि नेताहरूको रबैया,क्रान्तिविरोधी गाइजात्रा देखाउने नेताहरूको विरुद्धमा बाेलनुपछ।यस्ता गाइजात्रा नगर्न।ठिक-ढंगले जनताका कार्यक्रम ल्याएर आउनुस भनु सुझाप दिनु हाम्रो दायित्व क्तविय हुन्जान्छन् । अन्तरक्रिया, बहस र मुखले भनेको उहाहरूले मान्नुभएन भने आफ्नो आबाज बारम्बार बुद्धिमता गरिराखनु पछ। त्यसैले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन बाध्य दबाफ दिनु युवाको भुमिका हुन्छ ।
नेतृत्व र सिद्धान्तको सवाल सवभन्दा ठूलो प्रश्न हो । यो कुरामा धेरै कुरा जोडिएको छ । सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व गयो या गएन भनेर हेर्नुपर्छ । तर नेतृत्व सिद्धान्त अनुसार गयो भने। पार्टी सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्छ ।
युवाहरूको कुरा कति पाटीभित्र सुनुवाइ हुन्छ,पूरा भएकाे छ?
हाम्रो सुनुवाई पाटीभित्र अहिलेसम्म भई राखेको छ। युवाहरूको यसको जिम्मा मुलत पार्टी मूल नेतृत्वले नै लिनुपर्छ लिएको छ। नेतृत्व यस मानेमा गंभीर छ, नभए यसको यत्रो विशाल पाटी यहाँसम्म आउन सक्छ।अहिलेसम्म हाम्रो जायज मागहरूलाई वहाहरूले सम्बाेधन गरेकाछन। हामी युवाहरुले पनि पाटीभित्रका नेता नेतृत्वलाई खुलामन सहयोग गरिनुपर्छ गनुपछ।नेताहरुले पनि त्यही ढंगले सोच्नुभयो भने अब क्रान्तिकारी युवाहरू आफ्नै नेतृत्व बाट खुशिले नाच्न गदगद थालेका छन् ।
एकतामा आएका युवाहरुसग तपाईहरूको सहकार्य कसरी हुन्छ ?
जुन जिम्मेवारी दिएर पार्टीले वाइसिएल नेपाललाई दिएको छ।अहिले आएर हामीलाई जसरी एकताको प्रकृयामा लागियो । यो अत्यन्तै सुखदायक छ, युवायुवतीकाे भावनाबमोजिम एकता सम्मानजनक समायोजन भन्ने मा कसैको दुईमत छैन । तर यहा युवाको समानताको साटो केहि त्तताे सलबलाउनु खाेजेकाे भान भएकाे छ । युवालाई अपमान गररिन खाेजिदैछ । यस गरी युवामाथि खेलने गरिन्छ, अपमान गरिन्छ भने मुलुकमा दिगो शान्ति र नयाँ जनसंविधान क्रियान र पाटी निमार्णमा असर पर्छ । त्यसबेला नेताहरू र देशले जनताले नराम्रो परिणती भोग्नु पर्ने छ । एकतामा आएका युवाहरुसग हाम्रो दाई भाई मन मुटु एक भएर एकता हुन्छ सहकार्य कसरी हुन्छ ?
तपाइ अहिले नेतुत्व बारे के साेचि राखनु भएकोछ ?
नेतृत्व र सिद्धान्तको सवाल सवभन्दा ठूलो प्रश्न हो । यो कुरामा धेरै कुरा जोडिएको छ । सिद्धान्त अनुसार नेतृत्व गयो या गएन भनेर हेर्नुपर्छ । तर नेतृत्व सिद्धान्त अनुसार गयो भने। पार्टी सिद्धान्त अनुसार चल्नु पर्छ । त्यो ढंगले गएको हामीले देखिराखेका छाै। सैद्धान्तिक रूपमै विचार नेतृत्वमा गंभीरता पाएकाे छु। नेतृत्वले गडबडी गरेपछि हामीबाट ढाकछोप गरियो भने झन नेतृत्वमा गंभीर समस्या पैदा हुन्छ । नेतृत्वलाई खराबी गर्दै जाने, जनताकाे विचमा जाने,गलत निर्णय कामले पार्टी र क्रान्तिको समग्र कार्यक्रममा असर पुगछ। त्यही भएर हामीले नेतृत्वलाई पार्टी, क्रान्ति भन्दा दाया बाया नगर्न,पाटी युवाकाे मुल्य मान्यता विपरित नजान खबरदारी गरिरन्छौ । हाम्रो मान्यता यो हो कि सिंगो क्रान्ति र युवाको कार्यक्रममा पार्टी नेता मुल नेतृत्व जाने वित्तिकै हामी लगायत सम्पूर्ण युवाहरूले पूर्णता पाउछ। कार्यकर्ता सबैको संगठनमा समस्या हल हुनेछ ।
अन्त्यमा यस अनलाइनमार्फत केही थप कुरा भन्नचाहनु हुन्छ ?
मईले संकेतिक रूपमा अहिलेसम्मकाे एकता युवाहरुकाे बारे राखेको छु । सबैले यो बुझ्न जरुरी छ कि पार्टी मूल नेतृत्वले हल नदिदा युवाहरुमा अन्याेलता छ। हाम्राे सम्पूर्ण भावनालाई काय दलले हल गरिकन धेरै ठूलो गडबी हुन बचाउनेछ। नेतृत्वले सोच्नु पर्छ । हाम्रा युवाहरुकाे मनभित्र पसिकन न्यायोचित भावना समिटियाेस सम्वन्धित सबैको ध्यान पुगोस । यही सन्देश यस अनलाइनमार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।